वर्णन मिडिया ४९ वर्षमा किन गरे गोबिन्दाले ‘दोस्रो विवाह’ ? यस्ताे छ कारण - वर्णन मिडिया
४९ वर्षमा किन गरे गोबिन्दाले ‘दोस्रो विवाह’ ? यस्ताे छ कारण
१५-साउन-२०७६ | ०९:५१:३३ am
गोबिन्दाले ४९ वर्षकाे उमेरमा दोस्रो विवाह गरेकाे खुलासा भएकाे छ । हालै भारतीय टिभी शो आपकी अदालतमा अतिथिका रुपमा पुगेका उनले आफ्नो विवाहबारे खुलासा गरेका हुन ।
उनले दोस्रो विवाह भने आफ्नै श्रीमती सुनितासँग गरेका हुन । उनले आफ्नै श्रीमती सुनितासँग दोस्रो विवाह गर्नुको कारण भने राेचक रहेकाे छ । उनले आमाको इच्छा अनुसार श्रीमतीसँग पुनर्विवाह गरेको बताए । उनले भने, ‘आमाकै इच्छा अनुसार ४९ वर्षमा पुगेर दोस्रो विवाह गरेको हु । ’ उनले सन् २०१५ जनवरीमा श्रीमती सुनितासँग धुमधामका साथ विवाह गरेका थिए ।
गोबिन्दालाई उनका काका आनन्द सिंहले ‘तन बदन’ बाट भारतिय फिल्ममा डेब्यू गराएका थिए र उनका काका आनन्द सिंहकी साली सुनिता मुंजाल गोबिन्दाको प्रेममा परिन् । सन् १९८७ मार्च ११ मा दुबैले विवाह गरे । यद्यपि, गोबिन्दाले आफ्नो करियरका कारण विवाहलाई चार वर्षसम्म लुकाएर राखेका थिए ।